छाडा बाच्छाहरु र यसले ल्याएको समस्या – Better Chitwan
छाडा बाच्छाहरु र यसले ल्याएको समस्या
August 14, 2016 August 18, 2016 by Better Sagar, posted in YOUthink
Author: Better Rabin
“बिहानै उठेर खेतमा पानी के कस्तो छ भनेर हेर्न खेतमा पुग्दा त तिन/तिन ओटा छाडा बाच्छाहरले धान बारी माडेर धान खादै गरेको देख्दा हत्तार हत्तार गर्दै लखेटियो । अस्ति भर्खर लगायऐको धान त बर्बादै पारेछ । उता काकाहरुको भटमास पनि सखापै भा रैच । कसलाई कराउने ? कसलाई गालि गर्ने ? कसलाई के भन्ने ? को संग हर्जना माग्ने अब । एकछिन पछि फेरि बाच्छाहरु भा तिर हेरेको उता फाटतिर कस्को हो धानबारिमा चर्दै रचन। । अब के गर्ने, कता तिर लखेट्ने जता लखेटे नि कसै न कसैको त नोक्सान निश्चित थियो । के गर्ने गर्ने ट्वा परियो आज।
कृषिमा आएको आधुनिकता संगसंगै खनजोतको लागी गोरुको प्रयोग तराई लगाएत भित्री मधेसहरुमा सामान्यतया छैन भन्दा पनि हुन्छ । गोरुको प्रत्यक्ष उपयोगिता घटे सँगै गाईका बाच्छा/बहरहरु लाई छाडा छाड्ने चलन बसिसकेको देखीन्छ आजकल । गाईरहरुले जब बाच्छा जन्माउछ, कुषकहरु त्यसलाई घाटा मान्दछन । न त खनजोतको लागी, न नै मासुको लागी होस गोरु/बाछा(हरु) बिकदैन्न आजकल त्यसैले होला अधिकांस बाच्छाहरु जन्मिएको महिना भित्रै कुपोषित बनाई मारीन्छन या कि त केहि महिना पालेर बाच्छालाई छाडा छोडिन्छन। यसरी छाडा छाडिने बाच्छा/बहर(हरु) दिनानु दिन बढ्दै छ आजकल ।
गाँउघरमा त यस्को नकरात्मक असरहरु टट्कारो रुपमा देखा पदै आएको छ आजकल । महङ्गो खेतला, बिउ बिजन, अनेकौ दुख भाति गरेर लगाएको खेतीबाली छाडा छाडिएका बाच्छा/बहर हरुले येकै रातमा सखाप पार्दा पनि किसानहरु मुकदर्सक मात्र बन्न बाध्य छन् । हुन पनि कसलाई गाली गर्ने ? कसलाई गऐर के भन्ने ? को संग हर्जना माग्ने ?
यसै गरी आजकल यसको उदाहरण सहरका सडकहरुमा प्रत्यक्ष देख्न पाईन्छ । यसले सहरि सडक अस्थबेस्थ त देखिऐको छ नै कयौ सडक दुर्घटनाहरु येस्तै छाडा छाडिएका घरपालुवा जनवारकै कारणले हुने गरेका छन् ।
हुन त यो समस्या धेरैलाई सामान्य र तुक्ष लाग्न सक्छ । तर गाईका बाछ्छा/बहरहरु ब्यवस्थापन सम्वन्धी बेलैमा निती र कार्ययोजना नल्याउने हो भने यो समस्या पछि भयाबह स्थिति ल्याउने निश्चित छ ।
तपाईहरुलाई के लाग्छ !! के कस्ता ऊपायहरु अपनाऊन सकिएला त जस्ले गर्दा यस समस्याको दिर्घकालिन समाधान हुन सक्छ ?
Tagged Rabin Shrestha
Previous postBetter School
Next postI love to smile, rest is my life.